Ndepụta oku na-enye ndị ụlọ ọrụ ohere itinye akwụkwọ nyocha
Nyocha site Google egosi na 80% nke ndị ahịa ndị gara na ebe nrụọrụ weebụ n'agbanyeghị ma site na kọmputa, ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ọ ga- họrọ oku ekwentị kama ozi email ma ọ bụ ụdị ntanetị dị ka usoro ọzọ ị ga-eme. N'otu aka ahụ, 65% nke ndị ọrụ smartphone na-enweta ịntanetị kwa ụbọchị na 94% n'ime ha na-eme ya iji nyochaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, mana naanị 28% mechara gaa ịzụta site na otu ngwaọrụ ahụ.
Ihe nke a pụtara maka ndị na-ere ahịa bụ nke ha nchịkọta data ezughi ezu ma na-eduga na enwere ike ikwu na ọrụ ntinye aha karịa itinye ego na azụmaahịa n'ịntanetị ha na-eme. Ihe ngwọta maka ịbawanye nloghachi na dollar ahịa nwere ike ịdina na nsonaazụ oku na-enye gị ohere ịkọwa kpọmkwem ụzọ dijitalụ nke ndị ahịa na-eme iji ruo ebe ha na-ere.
E nwere di na nwunye ụzọ mejuputa oku nsuso. Otu ụzọ dị mfe bụ gbanwee nọmba ekwentị dabere na isi mmalite nke peeji. Anyị debere edemede anyị mepụtara iji mee nke a. Iji malite, anyị na-akwado ndị ahịa ka ha nweta akara ekwentị maka ọchụchọ, otu maka mmekọrịta mmadụ na ibe, na otu maka saịtị na-ezo aka ka ha wee nwee ike ịmalite ịkọwa mbọ ha site na otu. Otherzọ ọzọ bụ ịdenye aha na ijikọ ọrụ ọkachamara - ọtụtụ n'ime ha ga-abanye n'ezie ihe omume na arụmọrụ gị nchịkọta ngwa.
Ọrụ ịkpọ oku na-ekpokọta ozi sitere n'ọtụtụ ebe, gụnyere azụmaahịa nchọta ihe, mgbasa ozi AdWord na ndị ọzọ wee jikọta ya na data oku ekwentị iji chọpụta ụzọ onye ahịa nwere ike isi. Nke a na - enye otutu ozi banyere ebe ndi mmadu choro ahia, tinyere otu ha siri choputa banyere ahia ma obu ahia. Site na ozi dị otú ahụ, ịzụ ahịa ezubere iche, nke ga-enye ohere ị nweta nloghachi kwa dollar ọ bụla etinye na ahịa, ghọrọ mpempe achicha.
DialogTech bụ otu ọrụ dị otú ahụ, yana njikọta maka Hubspot, Nchịkọta Google, na ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ. Ha nwere API siri ike. Ndị ọzọ na-egwu egwuregwu n'ahịa bụ Kpọọ, Century mmekọrịta na LogMyCalls.
Mgbe atụmanya na-akpọ azụmaahịa, ọrụ ịkpọ oku na-agbakọ data dị iji chọpụta ma onye kpọrọ oku ahụ mgbe ọ kirisịrị mgbasa ozi dijitalụ akwụ ụgwọ, ndepụta injinị nchọta ihe, ma ọ bụ site na Facebook. Ha na-enyocha nyocha ruo na nke pere mpe nke nkọwa, gụnyere mkpụrụokwu akọwapụtara nke dị na njinchọ ọchụchọ, oge mgbe onye kpọrọ oku lere anya na mgbasa ozi, ma oku ahụ sitere na ekwentị ma ọ bụ ekwentị, wdg. A na-etinye data ahụ na nchịkọta ya n'ọnọdụ ụfọdụ. Data ahụ na-enye nkọwa doro anya nke ịdị irè nke ahịa azụmaahịa ọ bụla etinyegoro, ma na-enye gị ohere ịme mma-na-akụ ahịa mmefu ego gị na atụmatụ gị.
Tags: Analyticsoku na-esochimkparịta ụkaifbyfooku ekwentịnọmba ekwentịutoojoogịnị bụ ịkpọku nsuso
Mee 23, 2012 na 6: 21 PM
Nke a bụ ezigbo ihe arụmụka arụmụka maka nsuso oku. Na Century Interactive, anyị ga-ekweta 🙂
Ọtụtụ oge, ndị na-ere ahịa anaghị enweta otuto ha kwesịrị. Mkparịta ụka ahụ n'etiti ndị na-ere ahịa na onye ahịa mgbe ụfọdụ na-ada ka nke a:
Ndị ahịa: “Ya mere, ị buuru m 20 clicks site na AdWords ụnyaahụ mana amaara m na ekwentị m akpọghị ma enweghị m azụmaahịa ọ bụla. Gịnị mere m ga-eji kwụọ gị ụgwọ ọzọ? ”
Onye ahịa: “Chere chere! Amaara m na ị natara ụfọdụ ndu ọkụ site na ịpị aka! Ọ ziri ezi? Atụrụ m anya?"
Gịnị ma ọ bụrụ na marketer ahụ nwere ike ikwu:
“E nyefere m gị clicks iri abụọ ma ha sitere na mkpụrụ okwu anọ ndị a. 20 nke clicks ahụ dugara na oku ekwentị NA 4 n'ime ha bụ nnukwu ahịa! Ekwetaghị m? Ka anyị gee ntị na oku ekwentị ndị ahụ edekọkọrọ ọnụ, m ga-egosi gị ihe m na-ekwu. ”
Oku obula n’eme akuko nke kwesiri ekwuputa.
Mee 24, 2012 na 12: 03 PM
Great blog banyere Oku nsochi na ya n'ezie nwere ọtụtụ uru.
Nke a bụ ndepụta nke uru m tinye na nso nso a nke nwere ike inyere onye ọ bụla na-agụ nke a aka ịghọta etu usoro nsuso oku dị mkpa si ahịa ọ bụla na-atụle mkpọsa ha na offline.
Tụọ mkpọsa ahịa gị site na pịa iji kpọọ - na-achọpụta na enwere njikọ na-efu efu mgbe naanị ịlele nleta weebụsaịtị
Enwere ike ịhụ ụzọ ndị ọbịa site na webụsaịtị iji mata ebe akpọrọ
Nọmba pụrụ iche maka ndị ọbịa ọ bụla pụrụ iche
Sochie isiokwu na-akparaghị ókè
atụnyere gị oku megide gị ahịa mata Keywords nke n'ezie n'ịwa ahịa
Njikọ Google ™ na-enye ike iji tinye data oku na Google Analytics that ka clicks nwee ike iji ya tụnyere mpịakọta oku.
Enweghị ngwaike iji wụnye, nweta usoro ntanetị nke igwe ojii 24/7 site na nbanye n'ịntanetị.
Mee 25, 2012 na 4: 46 PM
Ee, oku nsuso maa iyi uru mgbe. Itinye ego na ntanetị n'ịzụ ahịa ka dịkwa mkpa n'ihi na ọ bụ ego ahụ na -emepụta ụzọ na mbụ.